+45 နှုတ်ဆက်သောစကားစုသည်အထူးသူအားထုတ်ပယ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
Gustavo Cerati တစ်ချိန်ကပြောသည် "နှုတ်ဆက်ပြောနိုင်သည်မှာကြီးပွားခြင်း" နှင့်ဤခွဲခြာရိုးရှင်းသောဖြစ်စဉ်ကိုသောစှဲပေးသည်။ သို့သော် အဲဒီအချိန်လေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူးသို့မဟုတ်, ငါတို့မဟုတ်ဘယ်တော့မှ! နှုတ်ခွန်းဆက်စကားစုများသည်ခဏတာအတွက်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။ စိတ်ပညာရှင်များစွာသည်လူများ၏ကြီးထွားမှုအတွက်“ ပိတ်ထားသောသံသရာ” ၏အရေးကြီးမှုကိုထပ်လောင်းအတည်ပြုသည်။ ၎င်းသည်၎င်းသည်ကြီးမားသောရဲစွမ်းသတ္တိသက်ရောက်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏အဖြစ်မှန်၏အစိတ်အပိုင်းကိုအချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီဖြတ်ထုတ်ရန်ဘယ်တော့မျှမလွယ်ကူသောကြောင့် The များစွာသောလူများ၏တုန့်ပြန်မှုသည်ယခုအထိသူတို့အတွက်တည်ငြိမ်သောအခြေအနေများကိုထိန်းသိမ်းရန်အချည်းနှီးကြိုးပမ်းမှုတွင်ပါဝင်ခြင်းဖြစ်သည်။.
နင်နှုတ်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်လာရင်နာကျင်မှုအနည်းဆုံးလမ်းကြောင်းကလွတ်မြောက်ခြင်းပဲ။ အကယ်၍ သင်သည်ကြာရှည်စွာမပြုလုပ်နိုင်သောအရာကိုကြာရှည်စွာချဲ့ထွင်ရန်ရွေးချယ်ပါက၊
"သွားတော့မယ်? ကျေးဇူးပြုပြီးစာမျက်နှာကိုဖွင့ ်၍ တစ်ဖန်ပြန်ဖွင့်လို့ရမလား? " ဝံဝီ
Helen Rowland က“ ယောက်ျားတစ်ယောက်ကဘယ်လိုနည်းနဲ့လဲဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမယ်ဆိုတာကိုဘယ်တော့မှမသိဘူး၊ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဘယ်အချိန်မှာစကားပြောရမယ်ဆိုတာမသိဘူး
Titte Kubo က“ သေခြင်းဆိုတာနင်မဟုတ်ပါဘူး
Abel Pintos က“ မင်းရဲ့နှလုံးသားကိုဘယ်လောက်ထိအကွာအဝေးနဲ့အချိန်ကမသိဘူးဆိုတာမသိဘူး
ရုသ ၁း၁၆ က“ သွားလေရာရာ၌ကျွန်မသွားပါမည်။ သူသည်သူနေထိုင်ရာအရပ်၌ကျွန်မအသက်ရှင်ပါမည်
JM Barrie က“ နှုတ်ဆက်တာကိုမေ့ပစ်တာကိုဆိုလိုတာလား” ဟူ၍ ဖြစ်သည်
“ မင်းကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်၊ ဒီနှုတ်ဆက်ခြင်းနဲ့အတူကျွန်မရဲ့အလှပဆုံးအိပ်မက်တွေထဲထဲဝင်ဝင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးမှာမင်းကိုနှုတ်ဆက်ပါတယ်၊ ငါ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမင်းကိုမင်းအကြောင်းဆက်လက်တွေးတောနေခဲ့ပေမဲ့” \_ t
ချားလ်စ်ဒစ်ကင်းက“ ခွဲနေရခြင်း၏နာကျင်မှုသည်ပြန်လည်တွေ့ဆုံခြင်း၏ ၀ မ်းနည်းမှုနှင့်မတူပါ
“ မင်းကိုငါအသက်ရှုရှူရှိုက်ခြင်း၊ အပြုံးများနှင့်မျက်ရည်များဖြင့်မင်းကိုချစ်တယ်။ ဘုရားသခင်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်သေပြီးနောက်သင့်ကိုငါပိုချစ်ပါလိမ့်မယ်။ ” Elizabeth Barret Browning
နှုတ်ဆက်ခြင်းသည်ထာဝရမဟုတ်ပါ ကောင်းသောနှုတ်ဆက်ခြင်းများသည်အဆုံးမဟုတ်ပါ၊ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ထပ်မံတွေ့ဆုံချိန်အထိကျွန်ုပ်ကိုလွတ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ” အမည်မသိ
Francois de la Rochefoucauld "အကွာအဝေးကိုတီထွင်ခဲ့သူမည်သူမျှတောင့်တခြင်း၏နာကျင်မှုကိုဘယ်တော့မှခံစားခဲ့ရသည်မဟုတ်"
ငါစိတ်ရှုပ်တာကိုကျမကျေနပ်တယ်။ ဒီဟာကသူမကကျွန်မကိုအနာတရဖြစ်စေခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးနာကျင်မှုဖြစ်ပေမဲ့ဒီစာကိုငါရေးလိုက်တဲ့နောက်ဆုံးသောကျမ်းပိုဒ်တွေဖြစ်ပေမယ့်ပါပလောနီရိုဒါ (Pablo Neruda)
ဟိုဆေးအန်ဂျယ်ဘူဆာက“ တနေ့မှာမင်းကိုငါချစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ငါပြောကောင်းပြောမယ်။ သေခြင်းကျော်လွန်ပြီးမင်းကိုငါဆက်ပြီးချစ်နေ ဦး မယ်။ မင်းလည်းနားမလည်နိုင်ဘူး။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကကျွန်ုပ်တို့ကိုစည်းလုံးစေပေမဲ့၊
ပလေတိုက“ ဘာမှမဖြစ်သလိုဘာမှဖြစ်မလာပါဘူး၊ လျှို့ဝှက်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုအခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့နားမလည်ရင်တောင်မှအခြေခံအားဖြင့်လိုက်နာတယ်”
မာတင်လူသာကင်း Jr က "ကျွန်တော်တို့ဟာသမိုင်းကိုဖန်တီးသူတွေမဟုတ်ပါဘူး။
၀ ီနီ ၀ ီနီက“ ငါဘယ်လောက်ကံကောင်းတာလဲ၊ ငါနင်ငါ့ကိုနှုတ်ဆက်ဖို့ခက်ခဲစေတဲ့အရာတစ်ခုခုရှိတယ်” ဟုပြောကြားခဲ့သည်
“ သေခြင်းဆိုတာမရှိဘူး၊ လူတွေမေ့ပြီးမှသာသေကြရတယ်၊ ငါ့ကိုသတိရရင်မင်းနဲ့အမြဲရှိနေမှာပါ” Isabel Allende ။
နှုတ်ဆက်ခြင်းမှစိတ်နာနေလျှင်ပင်သင်၏နှလုံးသားကိုပြန်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်ပျော်ရွှင်မှုများစွာရရှိခဲ့သည့်အတွက်သင်ငိုနေသည်ကိုတွေ့မြင်သင့်သည်” Kalil Gibran
"လှုံ့ဆော်ပေးသောလက်ချောင်းများ၊ အမိန့်တိုးတက်မှုရှိခြင်း; မင်းရဲ့သနားခြင်း၊ မင်းရဲ့တီထွင်ကြံဆမှုတွေကသူ့ကိုမျဉ်းတစ်ဝက်ကိုဖိနှိပ်ဖို့ပြန်လှည့်လာမှာမဟုတ်ဘူး။
ဂျွန်မီလ်တန်က“ …နောက်ဆုံးမှာ၊ သင်မြှုပ်နှံလိုက်သောမကောင်းသောအမှုအရာများနှင့်သင်၏လောဘကြီးခြင်းကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရသည့်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့တစ် ဦး ချင်းစီကိုနမ်းခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ပျော်ရွှင်မှုကိုကြာရှည်ခံပါလိမ့်မည်”
Nicholas Sparks ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်
Henry Wadsworth သည်အစ၏အနုပညာဖြစ်သည်
ဂျိန်း၊ ငါအရမ်းပျော်တယ် ကျွန်ုပ်၏သေခြင်းအကြောင်းသိသောအခါ၎င်းကိုမမှတ်မိပါနှင့်။ နောင်တရစရာဘာမှမရှိဘူး ... ငါ့စိတ်အေးအေးဆေးဆေးရှိနေတယ် "Charlotte Brönte (Jane Eyre)
ဂျော့ဘားနတ် Shaw "နှုတ်ဆက်ခြင်းအစမဟုတ်ပါ၊ ရောက်ရှိလာသည့်သူလည်းမဟုတ်ပါ"
ပါဘလိုနီရူဒါ (Pablo Neruda) က“ အချစ်ဟာတိုတောင်းလှတယ်
ဒန်နီယယ် Balavoine ဒန်နီယယ် Balavoine“ ကမ္ဘာပေါ်ရှိဆင်းရဲဒုက္ခအားလုံးသည်ဘာမျှမဟုတ်ပါ၊
တစ်ခါတစ်ရံကျွန်ုပ်တို့သည်အဖြစ်မှန်များမှဝေးရာသို့ထွက်ခွာသွားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှုထောင့်သို့ပြန်သွားရန်လိုအပ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်နှုတ်ခွန်းဆက်စကားမပြော၊ တံခါးကိုပိတ်လိုက်သည်၊ နှုတ်ဆက်သည်ဟုဆိုသော်လည်းပြန်လာရန်တံခါးကိုဖွင့်ထားသည်။
လီယိုနာဒိုဒါဗင်ချီက“ အချိန်နှင့်အမျှခဏနေအနားယူပါ၊ အနားယူပါ
Mario Benedetti က“ သူတို့နှုတ်ဆက်ကြပြီ
Cecelia Ahern "မင်းကအမြဲတမ်းငါ့အကြိုက်ဆုံးဟဲလို၊ ငါ့အခက်ခဲဆုံးနှုတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်"
ပြီးပြည့်စုံသော၊ ရိုးရှင်းသောအစီအစဉ်“ ထာဝရတည်တံ့ခိုင်မြဲသည့်အရာ၊ စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ကျွန်ုပ်သည်မပြည့်စုံနိုင်ပါ။ ”
Heal, Westlife“ မင်းဟာမင်းနဲ့နီးပြီလို့ငါထင်ရင်တောင်မှမင်းလမ်းသစ်တစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့မင်းကိုငါဝေးဝေးလိုအပ်နေတယ်
“ မင်း Alfonina ကိုအထီးကျန်ဆန်စွာထားခဲ့တာ။ မင်းကဗျာအသစ်တွေကိုဘာရှာခဲ့တာလဲ။ ရှေးဟောင်းလေနှင့်ဆားလေသံသည်သင်၏စိတ်ကိုနွေးထွေးစေသည်။ တဖန်သင်တို့အိပ်မက်၌ရှိသကဲ့သို့, Alfonsina အိပ်ပျော်, ပင်လယ်၌ဝတ်ဆင် "Alfonsina နှင့်ပင်လယ်" Alfonsina နှင့်ပင်လယ်, Mercedes Sosa ။
“ တစ်စုံတစ်ခုရပ်တန့်သွားပြီးတိတ်ဆိတ်မှုကအရမ်းကြီးတယ်၊ ကြေကွဲဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကြီးလွန်းတယ်။ လှေတစ်စင်းပြိုကျသွားတယ်။ ငါနင့်ကိုချစ်တယ်၊ မင်းကိုချစ်တယ်၊ ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတာကိုငါမသိဘူး” Farewell Farewell
မင်းရဲ့ချစ်သူအသစ်ဆီကိုငါ့ရဲ့မေတ္တာကိုပို့ပေးပါ၊ ငါတို့သရဲတွေအားလုံးကိုလွှတ်ပစ်ရတော့မယ်၊ ငါတို့တွေကကလေးတွေမဟုတ်တော့ဘူး။ ” ငါ့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုမင်းရဲ့ချစ်သူအသစ်ဆီသို့ပို့ပါ Adele
"ငါ့ချစ်သူကိုနှုတ်ဆက်တယ်။ ငါ့သူငယ်ချင်းကိုနှုတ်ဆက်တယ်။ မင်းတစ်ယောက်တည်းသာရှိခဲ့တယ်။ မင်းအတွက်ငါ့အတွက်တစ်ခုတည်းသောတစ်ယောက်ပါ" နင်ချစ်မြတ်နိုးပါသူချစ်သူ James Blunt
“ ထွက်ခွာတဲ့အခါနမ်းခြင်း၊ နှုတ်ဆက်ခြင်း၊ ကျွန်ုပ်ကိုချစ်တယ်၊ ရှည်လျားသောခရီးရှည်အတွက်ပေါ့ပါးသည့်ခရီးဆောင်အိတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုများက“ နမ်းခြင်းနှင့်ပန်းတစ်ပွင့်၊ နီနိုဘရာဗိုဖြစ်သည်။
“ နှုတ်ဆက်ပြီးထွက်သွားတော့စကားမငိုတော့ဘဲနှုတ်ဆက်လိုက်တာဘယ်လောက်ဝမ်းနည်းလိုက်တာလဲ” Plácido Domingo
သူဘာကြောင့်ထွက်သွားတာလဲ သူဘာကြောင့်သေတာလဲ။ သခင်ဘုရားသည်ထိုမိန်းမကိုအဘယ်ကြောင့်သိမ်းယူတော်မူသနည်း။ သူသည်ကောင်းကင်သို့သွားပြီးသွားရန်ကျွန်ုပ်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်အတူရှိရန်ခွန်အားရှိရမည်။ "Leo Dan ဘာလို့သူထွက်သွားရတာလဲ။
"ဒါဟာငါ့ကိုစကားပြောစရာမလိုဘဲနေနဲ့အတူနှုတ်ဆက်ခြင်းမရှိဘဲချန်ထားခဲ့တယ်" Miriam Hernándezငါ့ကိုထားခဲ့တယ်
“ ဒါကြောင့်ငါထွက်ခွာတော့မယ်၊ သနားဖို့ကောင်းတယ်၊ ငါနင့်နင့်နင့်နင့်နှုတ်ဆက်ပြီးငါထွက်ခွာတော့မယ်” Julieta Venegas မှထွက်ခွာတော့မည်
သိပ္ပံပညာရှင် Coldplay ကဒီအခက်အခဲဟာဘယ်သူ့ကိုမှမပြောရဲဘူး။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » ထိုအထူးပုဂ္ဂိုလ်ကိုထုတ်ပယ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန် +45 နှုတ်ဆက်စကားစုများ